Mamorona endrika manokana amin'ny Photoshop amin'ny alàlan'ny sary sy sarinao. | Famoronana an-tserasera
La fitaovana endrika manokana tena ilaina io mamorona haingana ny foroninay ao amin'ny Photoshop amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny endrika sy ny fanodikodinana azy ireo.
Mba hamoronana asa avo lenta amin'ity fitaovana ity dia ilaina ny manana endrika maromaro ahafahantsika mamorona avy amin'izy ireo. Ny safidy tsara indrindra hametrahana ny tenantsika amin'ny fomba ilaintsika dia ny famoronana azy ireo, na amin'ny sary ataontsika manokana na amin'ny sary. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny fomba hamoronana endrika anao manokana amin'ny fampiasana ireo fomba roa.
1 Mamorona endrika manokana amin'ny alàlan'ny sary ataontsika
2 Mamorona endriny manokana amin'ny fampiasana sary
Mamorona endrika manokana amin'ny alàlan'ny sary ataontsika
Izahay dia mamorona ny sarinay amin'ny endrika tadiavinay, na amin'ny fitaovan'ny fifantina na amin'ny borosy na amin'ny roa. Avy eo dia nofenointsika ny vilany fandoko mainty na, ny tsipika fotsiny no avelantsika hody, toy ny ohatra. Ataovy ao an-tsaina izany Izay ananantsika amin'ny mainty ihany no ho lasa endrika ary ho fotsy ny toerana banga amin'ny endrika.
Vantany vao vonona ny volavolantsika, dia tsy maintsy mifidy azy isika. Mba hanaovana izany dia mankany amin'ny sosona misy azy isika ary mitazona ny lakilen'ny fanaraha-maso dia tsindrio ny sosona ary voafantina ny sosona feno.
Mihazona ny Control izahay ary tsindrio ny sosona hisafidianana ny sary.
Ny dingana manaraka dia ny fanovana ny sary ho vector. Mba hanaovana izany, miaraka amin'ny sary voafantina, dia mankany amin'ny valan'ny lalana isika, izay matetika no eo akaikin'ny varavarankely misy sosona (raha tsy misokatra isika dia tsindrio ny Window> lalana). Manokatra ny menio mitete-midina izahay amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary eo amin'ny zoro ambony ambony ary tsindrio ny> manao làlana fiasana.
Hitanay izao fa lasa vector ny sarinay, hitanao fa noforonina manodidina ny endrik'ilay sary ny sary vatofantsika. Ny famadihana azy io amin'ny vector dia ahafahana miakatra kely ny sary raha tsy very ny vahaolana.
Farany, manana isika avadiho ho endriny manokana. Mandehana any amin'ny Edit> Farito ny kiheba voajanahary, omeo anarana araka izay tadiavinay ary tsindrio OK.
Izahay dia efa manana ny endrika tafiditra ao amin'ny galeriaky ny fitaovana fanao namboarina. Araka ny hitantsika amin'ny sary, manodinkodina endrika kely iray, mamorona endrika vaovao isika ary mamela antsika hiasa mora sy haingana.
Eto isika dia afaka mahita fa amin'ny fanaovana fanovana kely dia mamorona endrika vaovao.
Mamorona endriny manokana amin'ny fampiasana sary
Misafidy iray amin'ireo sarinay izahay izay misy singa mahaliana amin'ny volavolaintsika, ohatra ny zavatra, hazo, tranobe, rava sns.
Ankehitriny isika dia tsy maintsy mamadika ilay sary ho mainty sy fotsy.
Izahay aloha dia mamoaka ny sary. Mankany amin'ny Sary> Fanitsiana> Hue / saturation izahay ary mamindra ny bara famonoana ankavia, mba hananantsika ny sary amin'ny grayscale.
Avy eo hanovana azy ho mainty sy fotsy, mankany amin'ny kiheba Sary> Fanitsiana> Haavo isika ary mamindra ny zana-tsipika fotsy ho eo afovoany ary ny zana-tsipìka fotsy sy mainty koa, mandra-pahatongantsika manana sary volondavenona madio, fa tsy manary ireo endrika tiantsika.
ankehitriny mifidy izahay (miaraka amin'ny lasso na iray amin'ireo fitaovana hafa) ny faritra misy ny sary izay mahaliana antsika hamorona ny endrika. Adikainay ny fifantenana ary apetaho ao anaty rakitra vaovao.
Raha manana tabataba be ilay sary dia azontsika esorina amin'ny alàlan'ny sivana, noho izany dia mandeha any amin'ny sivana> galerie sivana izahay ary manandrana ilay tianay indrindra.
Manadio ny sarina gris izay mety sisa tavela, mandeha any amin'ny Selection> karazana loko izahay ary misafidy amin'ny mason-tsiranoka faritra mainty na fotsy. Omenay OK ary manao safidy mainty na fotsy izy io, arakaraka izay nofidinay, tsy firaharahana ny volondavenona. Tsindrio ny fanalahidy Control + J mba hamoronana sosona misy ny safidinao ary hamafana ny tabataba izay mety mijanona amin'ny sary na izay tsy mahaliana antsika.
Farany, manaraka ireo dingana nataontsika ihany izahay mba hamoronana endrika amin'ny sary, izany hoe, misafidy ny sosona isika, manamboatra endrika ao anaty varavarankely ary mamorona ny endrika avy amin'ny takelaka fanovana.
Ny idealy dia ny manana banky manana endrika maro izay mamela antsika hanana loharano mamorona ny forongon-tsika. Azontsika atao ny mameno ny endritsika manokana amin'ny maro hafa izay hitantsika eo amin'ny Internet, izay zarain'ny mpanakanto hafa na koa azontsika vidiana.
Raha te-hahita ohatra vitsivitsy amin'ny famoronana vita amin'ny endrika namboarina ianao dia azonao atao ny mikaroka ohatra, sary kely nataon'i Nacho Yague, ary ho hitanao ny halaviran'ny azonao ampiasana ity fitaovana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Mamorona ny endrinay manokana amin'ny alàlan'ny sary na sary.